iPad Pro - iPhone သတင်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
El Pro ကိုအိုင်ပက် ဒီမှာပါ Apple တက်ဘလက်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်းမှာ ၁၂.၉ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ၂,၇၃၂ x ၂.၄၈ pixel resolution တို့ကြောင့်သိပ်သည်းဆထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်သိပ်သည်းမှု ၂၆၄ pixels per inch နှုန်းရှိသည်။
IPad Pro အင်္ဂါရပ်များ
iOS9ကိုအလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ screen ကို iPad Pro မှာတပ်ဆင်ထားပါတယ် Apple A9X chipset Apple A1,8X နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁.၈ ဖြင့်မြှောက်မည်ဟုကတိပေးသည်။ GPU အတွက်မူအဆင့်မြင့်ခုန်ချခြင်းသည်ဂိမ်းများ (သို့) ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ ရုံးသုံးအလိုအလျောက်နှင့်အခြားအရာများအတွက်ဂိမ်းများသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုခံစားနိုင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ iPad Pro သည်a၈ Megapixel iSight နောက်ကင်မရာ အဘယ်သူ၏မှန်ဘီလူးf/ 2,4 ၏ aperture ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုများကို Full HD တွင် 30 fps နှင့် (120 fps) နှေးကွေးစွာရိုက်ကူးနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုရှိသော်လည်း iPad Pro ကaအထိ 10 နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဆက်လက်အသုံးပြုမှု၏။
iPad Pro အတွက် Apple Pencil
iPad Pro မျက်နှာပြင်ကို၎င်းနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် Apple ကခဲတံပန်းသီးကုမ္ပဏီမှတံဆိပ်အသစ်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အစွန်အဖျားပေါ်ရှိတည်နေရာ၊ အလိုလျောက်နှင့်ဖိအားများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကတိပေးသည်။
မှတ်စုများယူပါသို့မဟုတ် iPad Pro နှင့်ဆွဲပါ ၎င်းသည်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကတိပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်မရှိမဖြစ်အသုံးအဆောင်ဖြစ်လာသည်။
IPad Pro ရရှိနိုင်မှု
အိုင်ပက်ဒ်ကိုငွေ၊ ရွှေ၊ သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
128 GB Wi-Fi ။
128 GB WiFi + 4G ဖြစ်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Apple သည် iPad Pro တွင် MagSafe ကို ပေါင်းစည်းရာတွင် အခက်အခဲရှိနေနိုင်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ကောလာဟလများသည် ပထမနှစ်ဝက်တွင် Apple ပွဲတစ်ခုကျင်းပရန် တဖြည်းဖြည်းညွှန်ပြလာသည်...
Apple သည် 15-လက်မ OLED iPad Pro ကို လုပ်ဆောင်နေဖွယ်ရှိသည်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ဒီနေ့လေးတင် သူ့ iPad Air အကြောင်း ကျွန်မကလေးနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်တယ်။ သူနဲ့ သူ့ Apple Pencil2နဲ့လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
အိမ်မှာငါတို့မိသားစုလေးယောက်ရှိပြီးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာသူ့ကိုယ်ပိုင် iPad ရှိတယ်။ ပြီးတော့အမှန်တရားကစောင့်ကြည့်တယ် ...
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
နောက်ဆုံးစကားဝိုင်းတွင် Apple သည်မျှော်မှန်းထားသည့်တတိယမျိုးဆက်ကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသောသုံးစွဲသူများမှာအများစုဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ iPad Pro ကို Apple ၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအပိုင်း၌ယခုရနိုင်သည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Apple မှပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောထုတ်ကုန်များစာရင်းသည်ဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် Cupertino ကုမ္ပဏီကထည့်သွင်းခဲ့သည်။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Lululook ရဲ့သံလိုက် iPad ကိုင်ဆောင်သူကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
Lululook သည်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော iPad အတွက်ရပ်တည်ချက်တစ်ခုပေးပြီး၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သောသံလိုက်များကိုအသုံးပြုသည်။
Twelve South မှ HoveBar Duo, သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရပ်နားရန်နေရာတစ်ခု
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
သင်၏အိုင်ပက်ကိုမတူညီသောအမြင့်များနှင့်နေရာတွင်နေရာချရန် Twelve South မှ HoverBar Duo ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
အက်ပဲလ်ရဲ့အလားအလာကိုပြသတဲ့ iPad Pro အတွက် "သီဆို" တဲ့ကြော်ငြာတစ်ခု
ယခုနှစ်တွင် iPad Pro ဖြန့်ချိမှုပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုထင်မြင်နေသူများထဲမှတစ်ခုထက်ပိုနေသေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။